China Transparent Masterbatch BT-805/820 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
BT-805/820 iri pachena mastbatch ine mutakuri wePP resin iine 5% kana 10% Kujekesa Mumiriri wechitatu chizvarwa, zvakafanana basa seBT-9805. Iyo inoshandiswa muPP neLLDPE.
BT-805/820: PP nebwe iine 5% kana 10% Kujekesa Mumiriri wechitatu chizvarwa, zvakafanana basa seBT-9805.
BT-805/820 inokodzera isina kukwana kristaro resin yePP & LLDPE nezvimwewo.Izvo zvinogona kuwedzera zvigadzirwa 'kujekesa uye kupenya kwepamusoro, kusimba kwesimba, kuomarara, kupisa kwekukanganisa kupisa uye kukura kwehukuru, kudzora kuumba kutenderera.
Inonyanya kushandiswa mukushandurwa kwePP zvigadzirwa zvepurasitiki-jekiseni uye kugadzirwa kwePP, LLDPE yakakwira mwenje transmittance yakatetepa firimu, semuenzaniso chikafu, zvigadzirwa zvekurongedza zvinhu, mushonga wezvokurapa nezvimwe.
Muchena PP granule
25 kg / bhegi
Nyukireya Mumiriri mhando yemumiriri iyo inokodzera isina kukwana makristasi epurasitiki akadai sePP ne PE. Nekuchinja iko crystallization maitiro e resin uye nekumhanyisa iyo crystallization chiyero, inogona kuzadzisa chinangwa chekupfupisa iyo yekuumba kutenderera, kuwedzera yakajeka penya gloss, kuomarara, kupisa kwemafuta deformation, tensile simba uye kukanganisa kuramba kwezvakapedzwa zvigadzirwa.
Polymer yakagadziridzwa na Nyukireya Mumiriri, Haingochengetedze chete maitiro epakutanga epolymer, asi zvakare ine nani kuita mutengo chiyero pane zvakawanda zvinhu zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye hwakawanda hwekushandisa. Uchishandisa Nyukireya Mumiriri muPP haingoshandise girazi chete, asi zvakare kutsiva mamwe ma polymer akaita sePET, HD, PS, PVC, PC, nezvimwewo pakugadzira kurongedza chikafu, zvekurapa, chinyorwa chemagariro chekushandisa kwemazuva ese, kujekesa kuputira bepa uye imwe yepamusoro giredhi tafura.
Pashure: Transparent Masterbatch BT-800/810
Zvadaro: Ink Remover BT-301/302
Masterbatch Kujekesa Mumiriri KwePP
PP Kuzadza Masterbatch